Midawga Yurub oo ansixiyay mashruuc balaadhaan oo maalgelin ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Midawga Yurub oo ansixiyay mashruuc balaadhaan oo maalgelin ah
La daabacay fredag 19 december 2014 kl 14.00
Madaxda xukuumadaha Midawga Yurub ayaa shalay qalinka ku duugay, miisaaniyad maalgelineed ee ururkan oo ahayd mid balaadhaan. Middan oo la filayo in ay shaqooyin badan abuurto. Sweden ayaan kaalmo dheeraad ah siin doonin miisaaniyaddan maalgelineed, balse waxaa la isticmaali doona lacagta hadda la hayo.
Sida uu raysal wasaare Stefan Löfven u sheegay shaashada SVT. Miisaaniyadan maalgelineed ayaa loo isticmaali doona tusaale ahaan, waddooyin cusub, jidadka tareemada iyo goobo laga hirgaliyo qalabka dabaysha dabka ka dhaliya.
Miisaaniyadan ayaa samayn doona lacag u bixin doono baanka maalgelinta ee Midawga Yurub oo ah mid Midawga Yurub uu isticmaalo xarun uu ka amaahdo lacagaha maalgelinta iyo hawlgabka. Koomishanka Midawga Yurub ayaa ku rajo weyn in maalgelintan ay gaadho ku dhawaad 2 bilayn oo koroon.